Nna Chineke - WRSP
NNA MGBE OZI CHINEKE
1879: George Baker mụrụ na ezinụlọ ojii dara ogbenye na Rockville, Maryland.
Gburugburu 1900: Baker biri na Baltimore, wee rụọ ọrụ dị ka onye na-elekọta ubi na onye nkwusa.
1906: Baker gara na Azusa Street Revival na Los Angeles ebe ọ kọrọ na ọ na-asụ asụsụ dị iche iche.
1907: Baker zutere ma bido rụọ ọrụ na Samuel Morris. Baker kpọrọ aha ahụ “Onye ozi ahụ.”
1908: John Hickerson sonyeere ndị ikom abụọ ahụ na otu ahụ malitere ime nkwusa ọnụ.
1912: Ndị otu ahụ dara na Onye ozi ahụ gara Georgia ikwusa ozi ọma.
1913: Onye ozi ahụ malitere ịkpọ onwe ya Chineke mgbe ọ na-ekwusara nnukwu ndị na-ege ya ntị ozi. Ndị ụkọchukwu ole na ole nọ n'ógbè ahụ jidere ya wee kpụga ya n'ụlọ ikpe, ebe a mara ya onye nzuzu. A gwara ya ka ọ ghara ịlaghachi Georgia.
1914: Onye ozi ahụ na njem ahụ kwagara New York City wee bikọta n'etiti ndị na-eso ụzọ ya.
Circa 1915: Onye ozi ahụ lụrụ Peninah.
1915-1919: N’oge a, onye ozi ahụ gbanwere aha ya ka ọ bụrụ Onye isi ekworo, gbabigara MJ Devine. Nke a ghọrọ Nna Nna.
1929: Obi nkoropụ zuru oke n'ihi Oké Ndakpọ Akụ na Nna nyere Nna Chukwu na Movement ihe ntụgharị nke ụmụazụ.
1930: Ọtụtụ narị mmadụ gara n'ụlọ ụbọchị ụka ọ bụla wee malite iwe ndị obodo gbara ya gburugburu.
1931: Na Sọnde Nọvemba 15, ndị uwe ojii batara na 72 Macon St. wee nwudo Fada Divine na mmadụ iri asatọ n'ime ndị na-efe ya.
1932: Nna Chukwu katọrọ ụlọ ikpe ma maa ya ikpe nga. A tọhapụrụ ya n'oge na-adịghị anya, mgbe ọnwụ nke onye isi ikpe ikpe.
1937: Onye bụbu onye na-eso ụzọ Verinda Brown gbara Fada Chineke maka ego enyere onyinye.
1940: Nna Chineke tinyere ọtụtụ ebe Peace Mission Movement iji zere ikpe ikpe n'ọdịnihu.
1940: Peace Mission Movement chịkọtara aha 250,000 na akwụkwọ mkpesa na-egbochi lynching.
1940: Nna Chukwu kwuru na Penina gafere.
1942: Nna Chukwu wepụrụ isi ụlọ ọrụ na New York na Philadelphia.
1946 (August): Nna Chineke mgbe ọ dị afọ iri isii na isii kwupụtara alụmdi na nwunye ya na nwanyị ọcha dị afọ iri abụọ na otu, Edna Rose Ritchings, onye a maara na njem ahụ dị ka Angel Angel. O mechara kpọwa aha mama anyị.
1953: Nna Divine na nwunye ya kwagara Woodmont, nnukwu ụlọ na mpụga Philadelphia nke nọgidere na isi ụlọ ọrụ nke Peace Mission Movement.
1965: Nna Chukwu nwụrụ.
1968: Tommy Garcia, bụ onye ekwuru na ọ bụ nwa nwoke Nna nke Chukwu, gbapụrụ na Woodmont.
1971: Jim Jones rutere na Woodmont estate wee kwuo na ọ bụ ọdịdị nke Nna Chineke.
1992: Akwụkwọ akụkọ nke Movement, the New Day, kwụsịrị mbipụta.
2012: E rere ụlọ nkwari akụ abụọ bụ ndị Movement rụrụ.
2012: Ewu ụlọ nke ga-ejide ebe nchekwa nke usoro ahụ malitere.
2017 (March 4): Nne nke Chukwu nwụrụ na Woodmont mgbe ọ dị afọ iri itoolu na abụọ.
E nwere ọtụtụ akụkọ ọdịiche dị na nwoke ahụ a bịara mara dị ka Nna Chukwu. Ihe ndekọ a na-ahụkarị na nke nwere ike ịbụ bụ na a mụrụ ya dị ka George Baker na 1879 na ndị nne na nna Nancy na George Baker Sr., ndị bụbu ndị ohu abụọ bi na Rockville, Maryland. Nna Chineke n'onwe ya kwuru obere banyere nwata ma ọ bụ nzụlite ya. Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na a mụrụ ya n'etiti 1860 na 1880, yana 1878 afọ a na-akọkarị akụkọ. Baker bi n’obodo dara ogbenye a na-akpọ Monkey Run, ebe ọ gara ụlọ akwụkwọ ọha na-ekewapụrụ iche na Jerusalem Methodist Church. Ọ nọrọ na Enwe Run ruo mgbe nne ya nwụrụ na 1897. Mgbe ahụ ọ hapụrụ ezinụlọ ya, na-amaghị ebe ọ na-aga.
Tupu 1900, enwere obere nkwekọrịta banyere ebe Baker nọ ma ọ bụ ihe omume ya. Enwere akaụntụ ndị a na-enyochaghị nke a tụrụ ya mkpọrọ na-agba na ngalaba ọcha nke trolley, na ịjụ ịga ụlọ akwụkwọ dịpụrụ adịpụ (Schaefer na Zellner 2008). Ka ọ na-erule afọ 1900, Baker bi na Baltimore, Maryland, ebe ọ rụrụ ọrụ dị ka onye ọrụ ubi na onye enyemaka onye nkwusa n'otu ụlọ ụka Baptist dị na mpaghara. Ọ gara na Azusa Street Revival na 1906 wee nwee nnukwu edemede ime mmụọ ka ọ na-asụ asụsụ dị iche iche. Na oge mbụ ọ malitere ịmata chi dị n'ime ya ma chee banyere onwe ya n'ụdị dịka chi (Watts 1995: 25). Na 1907, Baker zutere otu nwoke aha ya bụ Samuel Morris, onye nkwusa nke Baker nwere mmasị n’ebe ọ nọ ma kpọọ onwe ya Nna Jehovia. Baker chọpụtara na nkà ihe ọmụma nke Morris kụziri, na Chineke dị n'ime mmadụ ọ bụla, na-akpali. Dabere na ụfọdụ akụkọ, Morris kpọrọ onwe ya Chineke. Mụ nwoke abụọ ahụ malitere ịrụ ọrụ, Baker malitekwara ịkpọ onwe ya "Onye ozi ahụ," ebe ya na Nna Jehovia na-eso chi.
Na 1908, John Hickerson malitere ịrụ ọrụ na Baker na Morris. Hickerson bụ onye nkwusa ọzọ Africa America nọ n'ógbè ahụ, onye weghaara aha St. John the Vine. Ha atọ rụkọrọ ọrụ ọnụ rue 1912 mgbe mmekọrịta ahụ mebiri, ikekwe n'ihi nsogbu nke ịkekọrịta chi ha. Onye ozi ahụ kwagara South ma biri na Valdosta, Georgia ebe ọgbakọ ya kachasị bụrụ ụmụ nwanyị ojii. Na 1913, o nwere esemokwu ya na ndị nkwusa na Savannah nke dugara na ya ịnọ ụbọchị iri isii n'ime otu ndị otu agbụ. Otú ọ dị, ozugbo a hapụrụ ya n'ogige ahụ, ọ gara n'ihu na-eme nkwusa wee malite inweta otu ìgwè nke ndị na-eso ụzọ. N'agbanyeghị ihe ịga nke ọma ọ na-enwe, ndị na-ekwusa ozi ọma n'obodo ahụ yiri ya egwu, nke mere ka e jide ya. E kwuputara na ọ bụ onye ara, ọkachasị, ọ na-egosi, n'ihi nkwupụta ya na ya onwe ya bụ Chineke. Sourcesfọdụ isi mmalite na-akọ na onye ozi ahụ nyefere obere oge na mgbapu (Miller 1995), ọ bụ ezie na ndị ọzọ na-akọ na a gwara ya ka ọ hapụ Georgia ma ghara ịlaghachi (Schaefer na Zellner 2008). N'agbanyeghị usoro nke ihe omume ahụ, Onye ozi ahụ hapụrụ Georgia na ihe dị ka ụmụazụ iri na abụọ, wee gaa n'ebe ugwu na New York City na 1919. Otu n'ime ndị na-eso ụzọ ahụ bụ Peninah, nwanyị ọ ga - emesị lụọ. Obere ihe amatara banyere ndu Penina (kwa Penninah, Peninnah, Penniah) tupu ya abanye na The Messinger.
Onye ozi ahụ na ndị na-eso ụzọ ya nọrọ na Manhattan nwa oge, wee biri na Brooklyn na 1914 ebe ha biri ndụ n'ime obere ụlọ ruo ọtụtụ afọ. Onye ozi ahụ malitere ibu ọrụ maka ịchọta ọrụ maka ndị na-eso ụzọ ya, ha, n'aka nke ha, weghachiri ha ụgwọ ha. Ego ndị ahụ ka onye ozi ahụ kwụrụ maka ụgwọ ụlọ, nri, na mmefu obibi. N’oge a, otu a na - eto nwayọ nwayọ. Peninah, na-elekọta ụlọ ma sie nri maka ìgwè ahụ. N'oge a, ma ọ bụ ikekwe n'oge dị ka ụfọdụ akwụkwọ si kwuo, Onye ozi ahụ lụrụ Penina n'agbanyeghị mmachibido iwu ọlụlụ maka ndị na-eso ụzọ ya. O kwuru na alụmdi na nwunye ahụ bụ nke mmụọ na ọ bụghị mmekọahụ, n'ihi na ụkpụrụ omume nke otu chọrọ ka alụghị di. O doro anya ma enwetara ikike alụmdi na nwunye. Mgbe ọ bi na New York, Onye ozi ahụ kpebiri ịgbanwe aha ya ọzọ. N’oge a ọ kpọrọ aha ahụ Onye isi ekworo Devine, nke mechara kpọbiri MJ Devine. N'ikpeazụ, aha MJ Devine ghọrọ Nna Chineke (2008).
Na 1919, Nna Divine na ndị otu ya ihe dị ka mmadụ iri na abụọ kwagara Sayville, Long Island, bụ obodo ndị ọcha. Ọ bụ n'oge a ka o kwupụtara na ya bụ ọbịbịa nke abụọ nke Kraịst (Baer and Singer 2002). Obere ndi ahu bu onye mbu nke Afrika Afrika na Sayville. Ha biri n'otu ụlọ dị na 72 Macon Street, onye edepụtara onye nwe ya na aha Oriakụ Peninnah Divine, ebe ha ga-anọ ihe dị ka afọ iri. Nna Divine gara n'ihu na ụlọ ọrụ ọrụ ya wee chọta ọrụ maka ndị na-eso ụzọ ya na ndị obodo ndị ọzọ, ebe ọ na-etinye oge ya n'ọtụtụ ọrụ ụlọ, dị ka ịkọ ugbo. Ndị agbata obi ritere uru site na ọrụ ya wee yie ndị enyi, ebe ndị na-eso ụzọ nọ jụụ ma na-agbaso ụkpụrụ omume ọma. Ndị obodo jiri nsọpụrụ kwanyere Nna Chukwu.
N'ime oge 1920s, ndị otu nke Peace Mission Movement bidoro na-arịwanye elu wee malite ịdọta ndị na-acha ọcha, yana Nna Chineke na-enye ndị na-eso ụzọ ya nchekwa akụ na ụba na nke ime mmụọ. N'ikpeazụ, òtù ahụ nwetara ọtụtụ họtel na azụmahịa ndị ọzọ. Ndị na-eso ụzọ ya rụzigharị ụlọ ahụ wee rụọ ọrụ maka enweghị ụgwọ ọrụ, ndị isi ojii na ndị ọcha ọnụ, na-adabere na nduzi nke Nna Chineke. Mmalite nke oke ịda mba na nsogbu na-arịwanye elu nke ndị isi ojii chere ihu nyere ohere maka Nna Chukwu ka ọ kwado maka eluigwe na ala ya na ụwa (Miller 1995). Udo nke Peace Mission gbasawanyere na 150 “Mgbatị nke eluigwe;” Emere nnọkọ Peace Mission na Canada, Australia, na ọtụtụ mba Europe. Ndị otu na New York na Long Island rutere na 10,000 n'oge a. Udo Peace mere ka ndị otu si na obodo ojii dara ogbenye metụtara nnukwu ịda mba, ndị otu ọcha bụ ndị nkuzi New Thought dọtara, na ndị ojii sonyere na Universal Negro Improvement Association tupu onye nchoputa Marcus Garvey na 1927. Watts (1995: 85) na-atụle atụmatụ ndị otu ngagharị na mbido 1930 dị n'etiti 20,000 na 30,000.
Ọga ahụ toro na mpaghara ebe otu dị iche iche si Harlem na Newark gara Saysville ịga nnọkọ oriri na ọ preparedụ preparedụ a kwadebere nke ụlọ. Nri ahụ bụ n'efu nye ndị niile chọrọ ịnụ Chukwu kwuru, na Sọnde ọ bụla ndị mmadụ ga-eleta. Ka ọ na-erule 1930, ọtụtụ narị mmadụ ji bọs na ụgbọala na-abịarute, nke malitere ịkpasu obodo ndị gbara ha gburugburu iwe. Ọ bụ n'oge mmalite N'afọ 1930 ka otu a nakweere aha "International Peace Mission Movement." Na 1934, Nna Divine, onye n'onwe ya mepụtara otu mmekọrịta ọha mmadụ, wee nwee njikọ oge dị mkpirikpi na Communist Party na US ruo oge ụfọdụ mgbe enwere mmasị na ntinye aka ya maka ikike obodo.
Mgbe Peace Mission na-eto ma na-agbasa, ọ dọtara mmegide mpaghara. Nnukwu oriri, okwuchukwu, na hallelujahs na nzukọ ya bịara sie ike ka ọgbakọ ahụ na-eto, mpaghara ahụ wee malite ịrịọ ndị uwe ojii. Na mbụ, e nyere tiketi ịkwụba ụgbọala iji mee ka ndị na-abịa ọmụmụ ihe belata. Onye ọka iwu mpaghara ahụ goro otu onye ọrụ nwanyị ka ọ rụọ ọrụ nzuzo n'ụlọ. Ọ nwara igosi na Nna Chukwu nwere mmekọahụ na ụmụ nwanyị nọ n'ụlọ ahụ, mana enweghị ike ịchọta ihe akaebe ọ bụla. Atụmatụ ya iji rafuo Nna Chineke dakwasịrị ya, dị ka akụkọ nchịkwa ọ gbara akwụkwọ kwuru na ọ leghaara ya anya (Schaefer na Zellner 2008). E nwere nzukọ nzukọ obodo, ma họpụta otu ụmụ amaala a na-akwanyere ugwu si n'obodo ahụ ịga leta Nna Chukwu na ụlọ iji kwupụta iwe ha. Nna Divine ji nkwanye ùgwù rụọ ụka na ya na ndị otu ya baara obodo uru, na ha emeghị ihe ọ bụla megidere iwu. Abọchị ole na ole ka nke ahụ gasịrị, ndị uwe ojii wabatara n’ụlọ wee jide Nna Divine na mmadụ iri asatọ n’ime ndị na-eso ụzọ ya.
E gosipụtara Nna Divine ma mee ka ọ bụrụ ikpe, ya na Lewis J. Smith dị ka onye isi oche ikpe. Ihe ndekọ ndị ahụ mere ka o doo anya na Smith, onye ọcha, na-emegide Nna Chukwu. N'ezie, onye ọka ikpe kagburu mgbapụta Nna Divine, na-ahụ na ọ ga-anọ n'ụlọ mkpọrọ n'oge ikpe ahụ niile (Miller 1995). E boro Nna Divine maka igbochi okporo ụzọ na ịbụ nsogbu ọha na eze, onye ọka ikpe kwukwara na Fada Divine bụ onye na-akpaghasị obodo na enweghị akwụkwọ ikike ya. A mara ya ikpe ịga mkpọrọ otu afọ na mma nke narị dollar ise. Kaosinadị, ụbọchị atọ ka nke a gasịrị, ọka ikpe nwụrụ site na nkụchi obi. A kọọrọ Nna Chineke ka o kwuo na "Akpọrọ m asị ịme ya," nke naanị gbakwunyere na akụkọ ifo ya (West 2003). Nna Chineke gbara akwụkwọ ka ikpe ya, ụlọ ikpe mkpegharị kagburu ikpe na ikpe ya. Nna Chineke weghachitere ozi ya na ewu ewu na ọkwa dị elu.
Movementtù ahụ malitere itinyekwu aka na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-eso 1935 Harlem Riot, na Jenụwarị, 1936, òtù ahụ haziri mgbakọ na ikpo okwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke jikọtara Ozizi nke Nna Divine. Mgbe ahụ, Chineke duuru Peace Mission Movement na New York City n'okpuru "Rlọ Ọrụ Gọọmenti Ziri Ezi" na ebumnuche nke inweta ikpe ziri ezi maka ndị ojii. Ihe kachasị mkpa, ebumnuche ozugbo bụ ịkwụsị lynching. Na mgbakwunye, ikpo okwu chọrọ ịkwụsị nkewa, ma bulie ọrụ gọọmentị na mpaghara a. Mgbe e mesịrị, na 1940, ndị Movement chịkọtara aha 250,000 na arịrịọ mgbochi lynching. Ozi ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke mmegharị na agbụrụ agbụrụ bụ ma arụmụka ma tupu oge ha. Ndị nnọchiteanya megidere nkewa ụlọ akwụkwọ na ọtụtụ mmemme mmekọrịta ọha na eze nke Franklin Roosevelt, nke ha kọwara dị ka "inye aka." Planks ndị ọzọ kpọrọ oku ka mba na njikwa gọọmentị nke nnukwu ụlọ akụ na ụlọ ọrụ dị na US
Peninah dara ọrịa na ngwụcha 1930 mana ọ pụtara na ọ gbakere tupu ọ nwụọ na mbido 1940 (ụbọchị ejighị n'aka). O doro anya na ọ bụ naanị mmadụ ole na ole nke Nna Divine maara banyere ọnwụ Peninah, e wee jiri nwayọ lie ya n'ili a na-edeghị aha Nna Chineke ekwughị banyere ọnwụ ya, mana na August 1946, ọ na-ekwupụta na alụmdi na nwunye ya na mberede na-eso ụzọ ọcha dị afọ iri abụọ na otu , Edna Rose Ritchings, onye akpọrọ Sweet Angel ma bụrụkwa otu n'ime ndị odeakwụkwọ ya. Nna Chukwu kwuputara na mmụọ Ritchings 'na Peninah esonyerela ma si otú ahụ ụmụ nwanyị abụọ ahụ bụrụ otu. A maara nke ọma dị ka mama mama n'ime njem ahụ. Nna Chineke kwughachiri ọzọ na njikọ alụmdi na nwunye a bụ nke mmụọ na ọ bụghị mmekọahụ. Alụmdi na nwunye a dị n'etiti agbụrụ kpatara iwe ọha, oke ụjọ n'etiti ụmụazụ ya, yana ụfọdụ ndapụ. Agbanyeghị, a nabatara ya ma sọpụrụ ya n'ime ọgbakọ ahụ. Nna Chineke ma kwupụta na ọ bụ ọdịdị nke Peninah (Schaefer na Zellner 2008). Di na nwunye ahụ bugara isi ụlọ ọrụ ahụ ebe ha dị ugbu a, bụ Woodmont Estate, nke dị na mpụga Philadelphia, Pennsylvania na 1953. ọrụ.
Nna Chineke nwụrụ na 1965 ma tinye ya na mausoleum na ihe onwunwe Woodmont. Mgbe ọ nwụsịrị, Mama Divine malitere idu ndú nke òtù ahụ ma ọ hapụghị nkwenkwe ndọrọ ndọrọ ọchịchị na omume ndị bụ isi bụ isi nke Nna Chineke (Miller 1995). N'ịgbaso ọnwụ Nna Chukwu, ndị otu nọ na Peace Mission Movement belatara. Otú ọ dị, ìgwè ahụ enwechaghị mmasị na mbanye, na-ahọrọ iji chebe ọkwa ya. Ọ bụ narị mmadụ ole na ole gbasasịrị na United States na Europe ka na-agbaso ụkpụrụ omume ọma siri ike nke Nna Chukwu guzobere. Ọnụ ọgụgụ dị nta nke ndị òtù na-anọgide na Woodmont, na-enyere mama Chineke aka ịgagharị njegharị nke ihe onwunwe ahụ na ịrụ ọrụ nlekọta kwa ụbọchị (Schaefer na Zellner 2008). A nabatawo Nne Chukwu dị ka nnabata nke Nna Chukwu, ma mesoo ya dị ka nke a, n'agbanyeghị na a na-asọpụrụ mmụọ ya na-adịghị anwụ anwụ (Weisbrot 1995).
Ọ bụ ezie na ndị otu Peace Mission gara n'ihu na-adalata ma na-erekwa ihe onwunwe kemgbe nna Chukwu nwụrụ, enwere mbọ ndị na-adịbeghị anya iji weghachite ụfọdụ akara ama ama ama. A zụrụ ụlọ oriri na ọineụ Divụ Divine Lorraine na nso nso a ma ugbu a na-arụzigharị ya. Ọ nọ ọdụ na Broad Street na Philadelphia na ọtụtụ afọ, mana ọrụ na-aga n'ihu iji wepụ graffiti na ịhazigharị ime ụlọ ahụ. Firmlọ ọrụ ahụ zụrụ ala ahụ ekwuola na ọ na-atụ anya ịrụ ụlọ nkwari akụ na mpaghara ahụ, ụtụ maka mmegharị ahụ na ọdịbendị na-ebi ndụ ọ butere n'obodo ahụ (Bloomwuist 2014).
Nne nke Chukwu nwụrụ na Machị 4, 2017 na Woodmont mgbe ọ dị afọ iri itoolu na abụọ (Grimes 2017). Emeela asọmpi iwu nke ala na ihe onwunwe.
Peace Mission Movement nwere mgbọrọgwụ na Iso Christianityzọ Kraịst, na-emesi ike na echiche ọhụrụ nke echiche ọdịnala ahụ. A kụziiri ndị òtù ahụ na ha nwere chi dị n'ime ma na Kraịst nọ n'akụkụ ọ bụla nke ahụ mmadụ ọ bụla. Nna Papa nwere mmetụta dị ukwuu nke edemede Robert Collier na-akwado ikike mmadụ niile nwere n'ụwa niile, na a ga-enwetakwa ihe ịga nke ọma site na iji chi dị n'ime ha. Nna Chineke lekwasịrị anya n'ọdịmma onwe nke ndị òtù. Onye ezi omume bu onye ya na Chineke ma nka choro ezigbo echiche. Nna Divine kwuru, sị, “Ihe dị mma dị adị! Anyị na-ewepụ ihe na-adịghị mma na nke na-adịghị mma… ”(Erikson 1977). Positivezọ echiche a dị mma na-eme ka onye na-eso ụzọ ya na Chineke bịarukwuo nso, ma bịarukwuo n'eziokwu ahụ. Nna Chineke zụrụ akwụkwọ nke New Thought ma nye ya ndị na-eso ụzọ ya (Watts 1995). Ọtụtụ ndị na-eso ụzọ ọcha nwere mmasị na njem ya site na nkuzi nke New Thought. Achọrọ ịgụ maka ndị òtù gụnyere ma Akwụkwọ Nsọ na akwụkwọ akụkọ Chineke, rue mgbe akwụsịchara mbipụta ha na 1992.
Ọ bụ ezie na nkà mmụta okpukpe Ndị Kraịst na-emetụta Nna Divine, na New Thought karịsịa, ọ hapụrụ ozizi Ndị Kraịst n'ọtụtụ ụzọ. Dịka ọmụmaatụ, na mmalite nke Movement, Nna Chineke jụrụ echiche nke ndụ mgbe a nwụsịrị na nkà mmụta okpukpe Ndị Kraịst ma kwado maka ịmepụta eluigwe na-enweghị atụ na Earthwa. N’akụkụ a, Nna Divine na-asọpụrụ America, nke ọ kpọrọ “Alaeze Chineke,” ma na-atụ anya ka ndị na-eso ụzọ ya mara onwe ha dị ka ndị America. O lere akwụkwọ nchoputa nke mba ahụ anya (Nkwupụta nke Nnwere Onwe, Iwu nke ikike na Iwu) ka e nyere ha n'ike mmụọ nsọ Chineke. Principleskpụrụ ndị bụ isi na akwụkwọ ndị a metụtara isi echiche nke Peace Mission Movement, ịha nhata na òtù ụmụnna n'etiti mmadụ niile. E kwesịrị inye onye ọ bụla ụdị ùgwù na nkwanye ùgwù n'agbanyeghị agbụrụ ha ma ọ bụ agbụrụ ha. Ọ kọwara Bekee dị ka "asụsụ ụwa niile," ọ bụkwa naanị Bekee ka a kuziri ụmụaka (Watts 1995). Nna Chineke ledaara Africa na ihe nketa ojii anya, n'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na ụfọdụ ndị na-eso ụzọ ya jiri ihe nketa a etu ọnụ.
Mepụta eluigwe na-enweghị atụ n'ụwa nke Nna Chineke hụrụ anya chọrọ ịjụ ụfọdụ akụkụ dị mkpa nke ọdịdị mmadụ. Achọpụtaghị ihe ndị a, Nna Chukwu kụziri, kere ịdị ọcha nke ahụ na mkpụrụ obi ma kwe ka Chineke banye na nsụgharị onye na-eso ụzọ. Ozugbo amatara ọnụnọ a, onye na-eso ụzọ ya ga-eme ihe ma chee echiche dị iche, jiri mmadụ ọhụrụ. A ga-enwe edemede ime mmụọ nke ga - eme ka "mkpụrụ obi na - adịghị anwụ anwụ" maliteghachi site na mkpụrụ obi ochie (Erikson 1977). Site na nghọta a, enwere ike ịga nke ọma n'ụwa ma nwee ahụmịhe.
Ihe kachasị mkpa nke ụkpụrụ omume ọma nke Nna Chineke bụ International Modest Code. Koodu amachibidoro ị smokingụ sịga, ị drinkingụ mmanya, okwu rụrụ arụ, okwu rụrụ arụ, okwu rere ure, ịgwakọta nwoke na nwaanyị n'ụzọ na-ekwesịghị ekwesị, na ịnata onyinye, onyinye ma ọ bụ iri ngo. Mmachibido iwu ndị nwoke na ndị nwanyị siri ike. Mụ nwanyị agaghị eyi slacks ma ọ bụ obere sket na ụmụ nwoke mkpụmkpụ aka. Ndị ahụ nọrọ na họtel ndị otu Movement nwere, dị ka Divor Lorraine, gwara ha ka ha rube isi na koodu ahụ, nke e kwuru na ọ ga-akpali "ịdị obi umeala, nnwere onwe, ịkwụwa aka ọtọ, na eziomume" (Primiano 2013). E tinyere mpempe akwụkwọ n’ime ụlọ nke ọ bụla nwere iwu na ụkpụrụ. E kewapụrụ ndị ọbịa site na okike. Ọ bụ ezie na oge agbanweela, iwu maka uwe dị mma ka dị mkpa rue mgbe mmechi nke Divor Lorraine dị na 1999. A gwara ụmụ nwanyị ka ha zere iyi uwe ogologo ọkpa, obere sket, ọtọ midriffs, halters, na obere ịkpụ olu, na ntutu isi Mụ nwoke enweghị ike ịwụ okpu, uwe elu na-enweghị aka, ma ọ bụ uwe na-enweghị aka. Edebere ihe e dere ede n'ime ụlọ nke ọ bụla na-ekwupụta iwu na ụkpụrụ (Primiano 2013). N'ihe kariri maka ndi otu na odinihu nke mmeghari ahu, a choro ndi nwoke na ndi nwanyi ka ha ghara ịlụ. Iwu a ji nwayọọ nwayọọ gbasaa site na Nna nke Chineke gaa na ndị niile na-eso ụzọ dị egwu. Nna Divine kụziri na ụmụ mmadụ amụrụ site na mmekọrịta nwoke na nwanyị "amụrụ na ezighi ezi" yana ịmụta otu esi amụghị bụ isi ihe n'ịmụta etu anaghị anwụ (Black nd). N'ịkwado ụkpụrụ omume a, Nna Divine kụziri na enweghị obere mpụ, na mpụ niile na-esite n'otu mkpali ọjọọ (Weisbrot 1995).
Nna Chineke bụ onye na-akwado ikeketeorie, òtù ahụ nwekwaara ma na-ejikwa netwọkụ azụmahịa. N'otu oge ahụ, ọ bụ onye nkwado siri ike maka ịdabere na nke onwe ya, nke mere ka ọ megide ụdị ọrụ akụnụba dị iche iche. Ọ kwenyesiri ike na usoro ụlọ akụ ma gbaa ụmụazụ ya ume ka ha ghara itinye ego ha n'ụlọ akụ. Ndị na-eso ụzọ ga-eji ego mee ihe ịzụrụ onwe ha, agaghị akwụ ụgwọ. A machibidoro ha iwu ime mkpuchi, n'ihi na ime nke ahụ gosiri na ọ tụkwasịghị Chineke obi, a ga-akagbukwa mkpuchi ndụ. Ha agaghị anara ego ọ bụla ma kwụọ ụgwọ ha ji. Na mgbakwunye, ekweghị ka ndị mmadụ n'otu n'otu nweta ọdịmma, dịka Nna Chukwu kwadoro n'ụzọ dị ukwuu maka enyemaka onwe onye, ​​na ndị na-eso ụzọ ya tụkwasịrị ya obi nke ukwuu. N'otu aka ahụ, ndị nwere azụmaahịa n'ime otu ahụ nabatara naanị ego, anabataghị ndụmọdụ, yana, dabere na ụkpụrụ omume otu ahụ, ereghị mmanya ma ọ bụ ụtaba (Watts 1995).
Ọnọdụ mmụọ nke Nna Chineke gara n'ihu na ndụ ya. Ọ malitere dị ka onye ozi, na ihe dịka 1920 bidoro ịkọwa onwe ya dịka ọbịbịa Kraist nke ugboro abụọ. N'oge dị iche iche ọ zoro aka na onwe ya dị ka Chineke, mana ọ bụ na 1951 ka o mere hoo haa nkwupụta a. O kwuru na "Achọrọ m ịbụ onye m bụ, Chineke Pụrụ Ime Ihe Niile!" (Erikson 1977). O mechara kọwaa Chineke dị ka “Ọ bụghị nanị na Chineke bụ mmadụ ma nwoghara onwe ya. Edegharịrị ya ma weghachite ya. Ọ rụzigharịrị na Ọ rematerialates. Ọ na-emegharị anya na Ọ bụ ihe atụ. Ọ na-egosipụtakwa na Ọ na-eme ka ọ pụta ìhè "(Watts 1995). Ọ kọwara usoro a n'ụzọ dị otú a: “N'obi m ka m bịara dị ka Mmụọ dị adị na-enweghị akụkụ, ruo mgbe m na-ewetu onwe m ala n'ụdị ahụ mmadụ, n'ọdịdị nke ụmụ mmadụ m bịara, ka m wee gwa ha okwu n'asụsụ nke ha, na-abata mba ekwesịrị ịbụ Mba nke Onwe Onye ahụ, ebe mmadụ nwere ihe ùgwù ijere Chineke ozi dị ka akọ na uche ya si chọọ ”(Watts 1995: 177-78). O yiri ka ọ kwenyere, ma duga ndị na-eso ụzọ ya ka ha kwenye, na ọ bụ anwụghị anwụ na ọ gaghị anwụ anwụ n'anụ ahụ ma ọ bụ nke mmụọ. Agbanyeghị, mgbe ọgbọ izizi nke ụmụazụ mechara, ndị otu gbanwere ụfọdụ echiche ya banyere ọnwụ na ndụ mgbe a nwụsịrị. Ka o sina dị, ha nọgidere na-ele Nna Chineke anya ka ọ ghara ịnwụ anwụ ma ka dịrị na mmụọ. Ha egosiputa nkwenkwe a site na ịhapụ ya ebe a na tebụl maka oriri udo na oriri agbamakwụkwọ (oriri Weisbrot 1995).
Peace Mission na-arụ ọrụ ụka kwa ụbọchị na Sọnde nke gụnyere ịgụ abụ na abụ, ịgụ site na Akwụkwọ Nsọ, ịkpọ egwu nke Nna Chukwu, okwu sitere na Mama Divine, na okwuchukwu si mba ndị ọzọ ma ọ bụ site na ndị ọbịa. Ọrụ ndị ahụ anaghị etinye onyinye ma ọ bụ onyinye (International Peace Mission Movement nd).
Ememe dị mkpa na Peace Mission Movement bụ nnukwu oriri oriri udo nke Nna Chineke malitere ijide n'oge oke ịda mba iji nye ụmụazụ ya nri n'efu. Enwere, ma ka dị, ọtụtụ ihe ọmụmụ nke ndị na-echere chere. Nna Chukwu gọziri nri ọ bụla tupu e nye ya. Nnukwu nzukọ na usoro ọmụmụ dị iche iche kpọrọ oku ka ha rie nri abalị ogologo oge nke ndị otu egwu dị iche iche bịara ya. Na ngwụcha mmemme oriri abalị, Fada Chukwu ga-ebili kwuo okwuchukwu ya. Ndị na-ege ntị ga-eji mkpu ọubeụ na-aza, na-awụli elu, na-ebekwa ákwá. Oriri ndị a, nke a na-enye kwa izu, bụ akara nke ọrụ ebere nke Chukwu yana akụ na ụba ya. Nye ndị na-eso ụzọ ya, oriri oriri ahụ gosiri nkwado ya na obiọma ya, ha dọtakwara ọtụtụ mmadụ n'ebe ọ nọ. Ndị obere otu na-anọgide na-akwado oriri a na-eri oriri a (Schaefer na Zellner 2008).
Na mgbakwunye na nnukwu oriri oriri, oriri alụmdi na nwunye dị n'etiti Nna Divine na Mama Divine na-eme kwa afọ na Eprel 29 dị ka "ezumike mba, agbụrụ, ezumike ụwa." Ememe ncheta a na-egosi ndị na-eso ụzọ "Alụmdi na Nwunye nke Kraịst na Chọọchị Ya" na "njikọta n'etiti eluigwe na ụwa." Ndị otu na-agbakọta na ala Woodmont iji kesaa nnukwu oriri na ọfụma na afọ (Schaefer na Zellner 2008).
N'ime afọ ndị mbụ nke mmegharị ahụ, ndị òtù Peace Mission kwadoro ma ha na ndị ọzọ na-eso ụzọ. Otu onye ọzọ nọ n'ụlọ ma na-aga ụka na mmemme. Nna Chineke kwenyere na ime ka ndị otu ahụ biri na oghere dị n'etiti ibe ha mere ka ha na ya dịkwuo nso, ma gbaa ume nha anya o kwusara. N'ime ụlọ ndị mbụ mbụ nke Nna Chukwu nwere ma gbaa ọsọ, o nyere ndị ọrụ obodo ọrụ. Ndị otu ahụ ga-enyefe ụgwọ ọrụ ha n'aka ya maka nri, ụlọ, na nkwado ndị ọzọ. Kemgbe nna Divine nwụrụ, ndị otu belatara. Agbanyeghị, otu ole na ole na US na esenidụt na-arụsi ọrụ ike, gụnyere otu dị na ala Woodmont na mama m (Schaefer na Zellner 2008).
Gbaso ụkpụrụ omume nke Nna Chineke guzobere gụnyere itinye aka siri ike na njem ahụ na ụkpụrụ omume siri ike n'ọtụtụ ihe. Otu a gbochiri alụmdi na nwunye, yana njikọta "oke" nke nwoke na nwanyị. Na “Eluigwe” na oghere ndị ọzọ a na-emegharị mmegharị ahụ, e debere ndị nwoke na ndị nwanyị iche.
Mgbe ezinaụlọ rutere na ụlọ ndị ọbịa, ndị ezinụlọ (ndị di na nwunye, ụmụnne nwoke na ụmụnne nwanyị) na-ekewa ma nwee obere mmekọrịta. E kenyere ụmụaka ka ha bụrụ ndị nne na nna (West 2003; International Peace Mission Movement nd). A hapụkwara ọbụbụenyi ndị mbụ, ejighịkwa mmekọrịta nke ndị na-abụghị ndị ụwa eme ihe. Nna Divine chọrọ ezinụlọ ime mmụọ nke gụnyere ndị na-eso ụzọ ya niile n'onwe ya dị ka isi na nne na nna. Ọ bụ ezie na Nna Divine jụrụ alụmdi na nwunye ma chọọ ka ndị òtù ọlụlụ ghara ịlụ, ya onwe ya lụrụ ugboro abụọ. O kwuru na mmekọrịta abụọ ahụ bụ nke mmụọ ma ọ bụghị mmekọahụ. N'ezie, a na-ahụta Nne Chukwu n'ime otu ahụ dị ka "Nwaanyị Na-enweghị Nghọta." E nwekwara ụkọ ego. A gwara ndị otu ka ha zere ụlọ akụ na amụma mkpuchi, yana mgbazinye ego; jiri naanị ego wee zere kredit na ụgwọ; ma ọ bụ ịnakwere ọdịmma.
A na-akwalite njikọrịta agbụrụ n'ime mmegharị ahụ, na ijikọ ihe niile na-eme dị mkpa. Ndị na-eso ụzọ ojii ga-agbanwe aha ha, dịka aha ochie gosipụtara ọnwụ, yana aha ndị nna nna ohu nna ha (Watts 1995). N'otu aka ahụ, Nna Chukwu kwalitere ịha nhatanha nwoke na nwanyị, ụmụ nwanyị wee nwee ọtụtụ ọrụ ọdịnala ọdịnala.
N'okpuru nduzi nke Nna Chineke, Peace Mission nọ na-arụsi ọrụ ike na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ma na-akwado ọha na eze maka nha anya na nkwụsị, yana iwu mgbochi lynching na itinyekwu aka gọọmentị n'oge oke ịda mba. Nna Chineke duuru mmeghari na ihe omume na New York ya na ndị na-eso ụzọ ya. Ọ bụ ezie na Nna Chineke na ndị otu ahụ sonyere na nzukọ na ngagharị na Communist Party USA, mmegharị ahụ agaghị arụ ọrụ na Civil Rights Movement nke mere ọtụtụ afọ mgbe e mesịrị. N'oge Red Scare, Nna Chukwu were mkpebi mgbochi ndị ọzọ. Ka oge na-aga, mama Divine akwụsịghị ọrụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị ya, ndị ndọrọndọrọ ọchịchị ahụ belatara nke ukwuu na ndọrọ ndọrọ ọchịchị.
Udo nke Peace guzobere ndi otu inyeaka ato: ndi Rosebuds, ndi LilyBuds, na ndi ndi Crusaders. Rosebuds bụ otu maka ụmụ agbọghọ na ụmụ nwanyị, LilyBuds dị n'etiti ụmụ nwanyị meworo agadi, ndị Crusaders bụ maka ụmụ nwoke na ụmụ nwoke nọ n'afọ ndụ niile. Otu ọ bụla nwere yunifọm na njirimara nke ejiri mara ya, ya na uwe na-acha ezigbo ọcha iji mara ha na ndị ọzọ na-eso ụzọ. Iwu ndị a na-arụ ọrụ dị ka ukwe ukwe dị iche iche, na-eduga ma na-eme abụ dị iche iche na ọrụ na mmemme. N'okpuru Nna Chukwu, ihe dịka ọkara nke ndị niile na-eso ụzọ bụ ndị otu nke òtù ndị inyeaka (Weisbrot 1995). Ndi otu a kwadoro akwukwo abuo: The Okwu kwuru (1934–1937) na Ụbọchị Ọhụụ (1936–1989). Ha abụọ dịịrị ndị otu ya na ọha na eze. Akwụkwọ ndị a nwere isiokwu dị iche iche nke ụbọchị ahụ tinyere ihe omume ụwa na mpaghara.
Tupu ọnwụ ya na 1965, Nna Divine bụ onye ndu nke Peace Mission. Mgbakwunye ndị ọzọ nke eluigwe nwere ndị nduzi ha, mana chi nke Nna Chukwu mere ya ka ọ bụrụ onye ndu mmụọ maka mmegharị ahụ. Ndị otu a nwere ọtụtụ azụmaahịa, gụnyere họtel, ụlọ nri, na ụlọ ahịa akwa. Ndị òtù karịa Nna Chineke na-ejikarị arụ ọrụ ahụ eme ihe, ndị òtù nwere ike ibi na ngwongwo ndị nwere ego ọnụ. Nna Chukwu enwetaghi ego nke onwe. Agbanyeghị, ebe ndị otu nyeghachiri ụgwọ ọnwa ha n'aka Nna Chukwu, nwee ike ibi ndụ ọfụma ma nọrọkwa na-eri nnukwu oriri maka mmemme ahụ nke mere ka ama ama. Mgbe papa Divine nwụsịrị, Peace Mission na azụmaahịa ya kwadoro mama Divine na ndị ọrụ ya.
Mission Peace chere ọtụtụ nsogbu aka na akụkọ ntolite ya. Dịka ọmụmaatụ, na mmalite nke akụkọ ihe mere eme, Nna Chineke zutere njide na Georgia dị ka ndị ozi obodo na-ahazi imegide ozizi ya na ndị bi n'ógbè ahụ na-emegide ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke ndị na-ege ntị na-aga ọrụ Sunday ya. Na ihe ọzọ merenụ, ọgba aghara ọha na eze na ndị otu a mụbara mgbe obere nwa nwanyị nke ndị otu abụọ nwụrụ mgbe ọ jụrụ ịgwọ ahụike iji kwado okwukwe na Nna Chineke (Watts 1995). Esemokwu ego mere mgbe di na nwunye Peace Mission, Thomas na Verinda Brown, chọrọ nloghachi nke ego ha nyere njem ahụ mgbe ha kpebiri, megidere iwu Peace Mission, na ha chọrọ ibikọ ọnụ. Ikpe ahụ rụpụtara na iwu iwu nke Browns meriri, mana Nna Divine kpaliri Peace Mission site na New York na Philadelphia, na mpụga ikike ụlọ ikpe, iji zere ịkwụ ụgwọ achọrọ. Ọ bụ ezie na ọ nwere ihe ịga nke ọma na nke a, njem ahụ kewapụrụ ya na isi ụlọ ọrụ mbanye. Black Nationalists siri ike na Peace Mission ka ha na-ele iwu ya nke alụghị nwanyị anya dị ka agbụrụ igbu onwe ya ma ọ bụrụ na a nakweere ya.
Nyere na Peace Mission kwadoro alụghị nwanyị, biri n'otu obodo, ndị di na nwunye kewara ekewa sonyeere ngagharị ahụ mgbe Nna Divine lụrụ di na nwunye ugboro abụọ n'ihe ọ lere anya "di na nwunye nke mmụọ," ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na omume mmekọahụ nke Udo Ozi ahụ nwere nnukwu mmasị. Nna na alụlụ di na nwunye na nne Chukwu, afọ iri ise nke ya na nke ọcha, bụ ihe ihere n'oge ahụ. Otu mkparị mmekọahụ rụrụ arụ nke mere na mmegharị ahụ metụtara mmekọrịta rụrụ arụ n'etiti onye okenye Peace Mission so, John Hunt, onye were afọ iri na asaa Delight Dewett gafee mpaghara obodo maka "ebumnuche rụrụ arụ" mgbe ọ kwenyere na ọ ga-abụ Nwa agbọghọ bụ́ Virgin Mary na nne nke onye mgbapụta ọzọ. Ọ bụ ezie na Nna Chukwu katọrọ Hunt ma kwado nkwenye ikpe mpụ ya, enyo enyo nke ọha na eze na mgbasa ozi na-adịghị mma mụbara.
Esemokwu dị egwu nke metụtara Nna Chineke bụ onye otu Peace Mission, Mary kwesịrị ntụkwasị obi (Black nd; Watts 1995). Mgbe ihe malitere dị ka esemokwu ego, Mary kwesịrị ntụkwasị obi hiwere otu òtù okpukpe, Universal Light Movement, nke dọtara ọtụtụ ndị otu Peace Mission. Meri kwesiri ntụkwasị obi mechara dee akwụkwọ, “Chineke”: Ọ Bụ Naanị Nwoke Na-ahụ Anya (1937) na-ebo Nna Chukwu ebubo maka nrụrụ aka ego na ọnọdụ ọrụ dịka ohu. Otú ọ dị, ebubo kachasị emetụ n'ahụ bụ na enwere mmekọrịta mmekọrịta n'etiti ndị na-eso ụzọ, mmekorita nke nwoke na nwanyị, na nwoke idina nwoke na ebe obibi udo nke Peace Mission. O boro Nna Chineke ebubo na ya na ụmụ agbọghọ na-eso ụzọ ya nwere mmekọahụ, gụnyere ya. O dere na “Ọ na-edina ndi ọzọ, ndi n’eso ụzọ nwanyị na-eto eto, na-akpọ ha oku ịbịa na ebe obibi ya n’ime abalị, n’otu n’otu ma-ọbụ n’obere otu. Mgbe ha gbara ọtọ ma ọ bụ gbaa ọtọ kpam kpam, ọ na-etinye aka na aka ya n'ike, na-agwa ha na ha anaghị eme mmehie kama na-enyefe Chineke onwe ha. ” N'agbanyeghị mmekọrịta dị njọ na Nna Chineke, Mary kwesịrị ntụkwasị obi mechara laghachi na Peace Mission mgbe schismatic ya gbadara. Ka o sina dị, Black (nd) na-ekwu na "Ọ bụ ezie na Peace Mission dị na njedebe ya, mkpughe ọha na eze banyere ajọ omume mmekọahụ ya mere ka e nwee obi abụọ na ngagharị ahụ bụ isi ojii nke Black na-edu maka ịgba ohu ohu nke dọtara ndị mmadụ, were ha niile ego ha, ma mekwaa ka ndị na-eso ụzọ ya dị ufu obi. Asịrị ahụ tara ha ahụhụ. ”
N'ikpeazụ, Peace Mission bịara na esemokwu Jim Jones, onye guzobere Templelọ Nzukọ Ndị Mba. Jim Jones nwere obi miri emi mmetụta nke Nna Chineke (Halllọ Nzukọ 1987). Ọ gara leta Nna Chukwu na Philadelphia ọtụtụ ugboro n'oge 1950, Chineke na-anabata ma na-ekpo ọkụ nye Jones. Ma Jones ma Chineke malitere na Pentikọstal, na-akwado maka ịha nhatanha agbụrụ ma na-akwalite ụlọ ụka jikọtara ọnụ. Jones nwere mmasị na nkwupụta Nna Chukwu nke chi ya, echiche nke ịbụ "Nna" n'ime mmegharị ahụ, ozi nke chi dị n'ime mmadụ niile, isiokwu ala ekwere na nkwa nke ga-enye ohere ịgbanahụ ịda ogbenye na mmegbu. Na mbido ọrụ Jim Jones, ọ gosipụtara ihe omume mgbe Nna Chukwu nke Udo Peace. O guzobere ego nnabata ụka, nke, dịka mbọ Chukwu, si enweta ego site na nri ụka na azụmaahịa; mepere ulo oru ndi mmadu na ndi mmadu na ebe nri na ebe ndi mmadu no na ulo ndi mmadu nke na enye ha otutu puku nri kwa ọnwa, tinyere igba ume ndi mmadu; ma mepee ụlọ ahịa na-ere ihe n'efu, nye uwe, ma nye ndị ọzọ ọrụ mmekọrịta. N'otu oge ahụ, Nna Divine na Jim Jones nwere ụzọ dị iche n'okwu ndị ọzọ. Jones kwadoro socialism dị ka azịza nye ọtụtụ nsogbu America, ebe Nna Chineke kwadoro Black capitalism (Chidester 1988).
Mmasị Jones na mmasị ya maka Nna Chukwu kwụsịrị na njem 1971 ya na Philadelphia, dịka akụkụ nke njem ụgbọ ala nke oge ọkọchị nke na-achọ ndị na-atụgharị gafee mba ahụ. Jones gbalịrị ịchọta ndị na-eso ụzọ Peace Mission ka nọ na Philadelphia mgbe Nna Chukwu nwụsịrị. Jones kwuru na ọ bụ nlọghachi nke Nna Chineke. O nwere olile anya ime ka ndị a tọghatara laghachi California. Kaosinadị, ezutere ya na mama Divine iwe, onye kwuru n'ihu ọha “Anyị anabatala Pastorkọchukwu Jones na People'slọ Ndị Mmadụ. Anyị na-anabata ndị mmụọ ozi nke ibe ibe anyị! Anyị anaghịzi anabata ile ha ọbịa ọ bụla… A naghị anabata ha! ” (Halllọ Nzukọ 1987).
Ọrụ Peace Peace rutere elu n'oge 1930s n'etiti ịda ogbenye na enweghị ọrụ nke Oké Ndakpọ Akụ na nkwupụta ije maka ịha nhata maka ndị Africa America. N'ikpeazụ, òtù ahụ chere ihu na ọ ga-anwụ n'ihi ụkpụrụ Nna nke Chineke nke ịghara ịkpọbata ndị ọhụrụ na ihe a chọrọ nke ịlụ. Ndị otu na-aga n'ihu na-adalata mgbe Nna Chukwu nwụsịrị. Naanị narị ndị otu narị nọ, na, ihe na-erughị mmadụ iri na abụọ biri na mama Divine na Woodmont (Blaustein 2014). Obere otu ndi na-eso uzo mere agadi “… jiri ubochi ha nile kwadobe oriri oriri nso,” ha “na-eto nri ha. Ha na-eme achicha ha. Ha na-asacha ọlaọcha. Kwa ụbọchị jupụtara na omume iji kwadebe maka nri nsọ "(Blaustein 2014).
Site na nne Chineke na-agafe na ọnụ ọgụgụ dị nta nke ndị na-eso ụzọ na Woodmont, ọdịnihu nke usoro a ka edoghị anya. Site na nne nne Chukwu, ọgụ na mgba maka ịchịkwa ala na akụ ndị ọzọ sochiri. Tommy Garcia, onye amụrụ otu n'ime ndị na-eso Nna Chukwu wee zụlite dị ka nwa nna nna Chukwu, etinyela ọnụ na akụ na ego mmegharị ahụ. Garcia hapụrụ Woodmont mgbe ọ dị afọ iri na ise. Ndị otu ahụ ajụwo nkwupụta ya, ọ nweghị mkpebi ikpe ikpeazụ emere (Pirro 2017; Blookquist 2009).
Baer, ​​Hans A. na Merril Singer. 2002. Okpukpe American African. Knoxville, TN: Uniers nke Tennessee Press.
Black, E. nd “Jonestown na Woodmont: Jim Jones, Mama Divine na Mmezu nke Ebumnuche nke Nna Chukwu nke Obodo Chi Na-efu.” Nweta site na http://jonestown.sdsu.edu/?page_id=40227 na 15 July 2014.
Blaustein, Jonathan. 2014. "Philadelphia, Obodo nke Nna Chineke." New York Times, Disemba 29. Nweta site na http://lens.blogs.nytimes.com/2014/12/29/philadelphia-city-of-father-divine/?_r=0# na 3 March 2015.
Bloomquist, Sarah. 2014. "Ngbanwe Mmepe Na-aga na Divine Lorraine Hotel." ABC 6 Akụkọ akụkọ. Nweta site na http://6abc.com/realestate/redevelopment-underway-at-the-divine-lorraine-hotel/96154/ na 10 June 2014.
Bloomquist, Sarah. 2009. “Nna Chukwu na International Peace Movement.” 6abc.com, October 16. Nweta site na https://6abc.com/news/father-divine-and-the-international-peace-movement/1789153/ na 20 March 2019.
Chidester, David. 1988. Nzọpụta na igbu onwe onye: Nkọwa nke Jim Jones, Templelọ ndị mmadụ, na Jonestown. Bloomington: Mahadum Indiana University.
Erickson, Keith V. 1977. "Black Messiah: Nna Chineke Udo Mission Mission." Quarterly Journal of Okwu 63: 428-38.
Meri kwesịrị ntụkwasị obi. 1937. “Chukwu”: Ọ bụ Naanị Nwoke Na-ahụ Anya. ” Philadelphia: Universal Ìhè.
Grimes, William. 2017. "Chi nke nne, nke weghaara òtù di ya, nwụrụ na 91." Oge New York, Machị 14. Nweta site na https://www.nytimes.com/2017/03/14/us/mother-divine-dead-peace-mission-leader.html na 20 March 2019.
Lọ, John R. 1987. Gbanyere Ala Nkwa ahụ: Jonestown na American Cultural History. Piscataway, NJ: azụmahịa.
Pirro, JF 2017. "Nwa nkuchi nke Onye Nduzi Mgbasa Ozi Udo Alaghachi Gladwyne." Isi Taa, Ọgọst. Nweta site na http://www.mainlinetoday.com/Main-Line-Today/August-2017/The-Adopted-Son-of-a-Peace-Mission-Leader-Returns-to-Gladwyne/ na 20 March 2019.
Primiano, Leonard N. 2013. “Nna Chineke: Ka Na-eleba Anya na Filadelfia” Edemede. Nweta site na http://www.newsworks.org/index.php/local/speak-easy/51031-father-divine-still-looking-over-philadelphia na 10 June 2014.
Satter, Beryl. 2012. "Nna Chukwu Peace Mission Movement." Pp. 386-87 n'ime The Oxford Encyclopedia nke American Social History , nke Lynn Dumenil dere, Lynn. New York: Mahadum Oxford University.
Schaefer, Richard T. na William W. Zellner. 2008. "Nna Nna nke Chukwu." Pp. 239-78 mu Tù Ndị Pụrụ Iche: Nnyocha nke Ndụ Ndị Na-adịghị Ndụ. New York: Ndị nkwusa bara uru.
Watt, Jill. 1995. Chukwu, Harlem USA: Nna nke Chukwu Akụkọ. Berkley: Mahadum California Press.
West, Sandra L. 2003. “Nna Chukwu.” Encyclopedia nke Harlem Renaissance. Nweta site na http://www.fofweb.com/History/MainPrintPage.asp?iPin=EHR0116&DataType=AFHC&WinType=Free na 10 June 2014.
Weisbrot, Robert. 1995. "Nna Chukwu Peace Mission Movement." Pp. 285-90 na Okpukpe Ndị Ọzọ nke America, nke Timothy Miller dezigharịrị. Albany: Mahadum State nke New York Press.
Weisbrot, Robert. 1983. Nna Chukwu: Onye Utopian Evangelist nke Depression Era Onye Ghara Akụkọ Mgbe Ochie nke America. Urbana: Mahadum nke Illinois Press.
NNA MBAKA UMUNYI NA-EGO UNU NNA